‘शेरबहादुर’ हेर्न को-को पुगे ? (फोटो/भिडियो) « Ramailo छ
‘शेरबहादुर’ हेर्न को-को पुगे ? (फोटो/भिडियो)
यही शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘शेरबहादुर’ को बुधबार प्रिमियर गरिएको छ । कमलपोखरीस्थित कुमारी हलमा आयोजना गरिएको प्रिमियर शोमा फिल्म युनिट सहित नेपाली फिल्म र हाँस्य व्यांग्य क्षेत्रका दर्जन बढी व्यक्तिहरु उपस्थित थिए । उनीहरुले फिल्म राम्रो रहेको प्रतिक्रिया हेर्नुस् :
अभिनेता सुनिल थापाको शिर्ष भूमिका रहेको ‘शेरबहादुर’ को प्रिमियरमा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर परिवार सहित उपस्थित भएकी थिइन् । उनले फिल्म राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । यस्तै मह जोडी, निर्देशक दिपाश्री निरौला, निर्माता तथा कलाकार दिपकराज गिरी लगायतले फिल्म राम्रो रहेको बताए । नायक पल शाह र नायिका आँचल शर्माले फिल्म मन परेको प्रतिक्रिया दिए ।
प्रिमियरमा विशेष गरी कलाकार रविन्द्र झाले तारिफ पाए । अभिनेता थापा, नायिका मेनुका प्रधान, नायक कर्मको पनि प्रशंसा भयो । आर राजवंशी निर्देशित शेरबहादुर मा जात्रा निर्देशक प्रदीप भट्राई क्रियटिभ निर्देशकको रुपमा छन् । फिमलाई गौरी शंकर धुजु र धिरज रावंशीले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् ।